4 Khiyaamo Si Hel Out Most The Of Your Tareen Journey | Save A tareenka
Home > Tilmaamaha Tareenka Safarka > 4 Khiyaamo Si Hel Out Most The Of Your Tareen Journey
Haddii tani ay tahay markii ugu horeysay ee aad safar tareen, aan shaki ku jirin ay jiraan waxa ay noqon doonaa ugu horeeyay ee badan. Daacadii, ku alla kii uu siiyey safraya tareen fursad u tageen wada waalan badan waxaa ka mid ah! maxaad? Sababtoo ah waa heer sare! Lid ku ah raacid diyaarad ahayn, tours baska raaxo ama raacid hab-aad-ka mas'uul baabuur by, safar tareen ah waa ammaan, deg deg ah laakiin cajiib ah oo soo jiidasho iyo jaceyl. Mid ka mid ah ku doodi laga yaabo in ay u safraya tareen waa isku darka dhab ah Virginia Woolf maskax maqan iyo-maalin casri ah farsamaynta. Ah, aad arki doonaa naftaada horeba.
Tan iyo markii aad hore u heshay tigidhka diyaar - halkan u fiican 4 xeeladaha si aad u hesho ugu soo baxay ee safarka tareenka:
Fogaadaan Your Laptop & Phone
Waxaan ku talinaynaa in aad ka fogaato lahaa taag aad laptop safarka oo dhan, sida aad doonaa in la seegay aad u badan! halkii, hareerahaaga fiiri, arko waxa ka dhacaya; raaxaystaan ​​aragtida uu furmo suuqa iyo ka dabeecadda cajiibka ka baxsan. La soco marka dadka kugu heeraro ka feker waxyaabaha aad inta badan ma waqti aad u sameeyo. Waa fursad fiican in detoxify off ee qalabka maalin walba oo ay qaataan kakanaanta quruxda badan ee tareenka Journey ah in – meel kasta oo.
Ku raaxayso cibaaro ah ee Journey in Tareenku ku
Ma ballan qaadi karno waxa aad helaysaa in Eetaan Hawke – xaaladda Julie Delpy Tareen Journey on koowaad tareen kortaan (Oh, soo, ayaan waxaan oo dhan ma aragtay iyo daalay, in ka badan Ka hor inta gebogebada, si qarsoodi ah, rajeynaya aynu lahaan doono sheeko la mid ah jacaylka dhici noo.) Jejebiso ee Shell oo aynu waayo aragnimada ku dhacaan. Imisa caaqil, exhilarating, iyo sheekaysiga xiiso leh waxaad yeelan doontaa? The waayo-aragnimo iyo helitaanka si ay ula falgalaan dadka dhaqamada kala duwan waa dareen cajiib ah! ma garan kartid sida badan qurux badan saaxiibtinimada idin dhisi doonaa, sida badan jabaa aad leedahay doonaa ama sida badan shakhsiyaad breathtaking waxaad la kulmi doonaa. Haddii aadan aad u xishood, noqon mid ka mid ah marka hore in ay jebiyaan baraf iyo hadal dadka aad ka heli xiiso leh.
Bern si Tareenadu Geneva
Safarka in Groups
garaaca Waxba agagaarka safraya iyo qaadashada Tareen Journey ah si aad u magaalooyinka jecel in Europe iyadoo koox ka mid ah dadka aad u Sujuudaan. Haa, waxaan ognahay waxa aad ku fekereyso – Sidee baan multitask doonaa iyada oo qof walba rabitaanka, codsiyada, qof walba camal, iyo meelaha hore la qorsheeyey – oo aan xoogaa tahay kula on in. laakiin, wax waa – haddii aad si fiican u abaabulo oo ay leeyihiin hadal daacad ah ka hor inta aadan koraan safar this, wax wanaagsan u noqon doonaa ka badan waad qiyaasi kartaa.
Safarka koox ahaan iyo maalmo gaar ah hoos u qiimaha weyn u tigidhka tareenka (haa, run ahaantii aad ka heli karto dhimis on your tigidh si ay u, odhan, Trenitalia haddii aad u tagto on maalmaha fasaxa). Waxa kale oo uu idin siinayo qof si ay u wadaagaan waayo-aragnimo leh oo ay arkaan wax ka soo baxaysa aragtida dadka kale. Taasi, iyo – is ku dhaceen waddan shisheeye Europe waa dad aad u ogaato badan dhexdooda hubaal wanaagsan waxaa Solo samaynaya… waxaan xaq u yihiin ama xaq aynu nahay?
Bilow a Tareen Journey Journal & qaado Photos
Mid ka mid ah hababka ugu fiican in la isticmaalo waqtiga aad on tareen waa inuu ku soo bilowdo joornaal ay diiwaangeliso aad aragnimada. Waxaan oo dhan jidka aad u soo duudduubtay ee waxbarashada our, nolosha xafiiska, dhibaatooyinka maalin walba in aan inta badan illoobin inuu ka soo baxo in jir maanka dhibaato iyo neefsan labaad. Qoraalka joornaal ku siin doonaa aragti qaar ka mid ah waxyaalaha, gaar ahaan marka aad ku laabato, waxa uu muddo ka dib. Plus, waxa ay noqon doontaa xasuusta fiican oo u guura, iyo waano isagoo u ah waxyaabaha aad rabto in aad dareento / qabaa / waayo-aragnimo mar kale.
Ku raaxayso safarka tareenka, naftaada siin ogolaansho in aad isku dejiso oo ay qaataan wax walba oo ku saabsan safarka tareenka! The ugu kalsoonaan karo in ay meel inay jartaan tikidhka tareenka la saveatrain.com Hubaal, sidaas darteed – heli movin '!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, ka dibna riix halkan: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/train-journey-4-tactics/- (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)
talooyin tareen safarka traveltips
Waa Maxay Jiis The Best Europe leeyahay in ay bixiyaan
Tareenka Safarka Faransiiska, Tareen Safar Talyaani, Tareenka Safarka Switzerland, safarka Europe